Suuqgeynta, Iibka & Adeegga: Xeerarka Cusub ee Ka-Qaybgalka Macaamiisha | Martech Zone
Isniin, Disembar 9, 2013 Isniin, Disembar 9, 2013 Kelsey Cox
Maaddaama baraha bulshadu ay macaamiisha siinayaan cod ka sarreeya wixii ay weligood hore u lahaayeen, shirkadaha ugu caqliga badan ayaa beddelaya habka ay u wajahaan suuq-geynta, adeegga macaamiisha, iyo iibka. Maalin kasta, macaamiisha Mareykanku waxay qabtaan 2.4 bilyan oo sheeko xiriir la leh. Sidee looga hadli doonaa shirkaddaada? Macaamiisha faraxsan waa shirkadda ugu fiican saaxiibkeed waxayna kaa caawinayaan inaad fahamto sharciyada cusub ee ka-qaybgalka macaamiisha, SAP wuxuu ku soo ururiyey dhammaan macluumaadka muhiimka ah bogga hoose ee hoose.
In kasta oo alaabada shirkaddu ay muhiim yihiin, kaliya 40% dadka doonaya inay ku taliyaan shirkadda waxaa lagu go'aamiyaa aragtiyada ay ka qabaan alaabooyinka iyo 60% waxaa lagu go'aamiyaa aragtida ay ka qabaan shirkadda lafteeda. In kasta oo shirkaddu aysan sii xakamayn karin wadahadalka ku hareeraysan shirkadooda, haddana hubaal way ku fiirsan karaan iyada oo ay ku qaabayn karaan iftiinka ugu fiican ee suurtogalka ah.
Markay tahay iibka, macaamiisha waxay u baahan yihiin inay ku mashquulaan oo shirkadaha caqliga leh waxay tan ku samayn karaan iyagoo fahmaya caqabadaha gaarka ah ee macaamiishooda, iyagoo kula xiriiraya iyaga goor hore si ay u qaabeeyaan aragtidooda, iyo inay abuuraan khibrado iibsi oo heer sare ah oo aysan sugi karin inay saaxiibadood u sheegaan .
Adeegga macaamiisha heer caalami ah ayaa muhiim u ah abuurista u doodayaasha macaamiisha. 59% macaamiisha ayaa diyaar u ah inay isku dayaan nooc cusub si ay u helaan adeeg macmiil oo ka wanaagsan. Haddii aad wax badan ka ogtahay macaamiishaada inta ay kaa ogaanayaan, waxaad hubin kartaa in sumaddaadu had iyo jeer aad looga hadlo.
Tags: ganacsihawlgelinta macaamiishakhibrada macmiilkaAdeegga macaamiishamarketingKordhinta Iibkawarbaahinta bulshada
12, 2013 at 1: 24 PM
Maqaal xiiso leh! Si qurux badan ayaa loogu sharraxay sawirada fikirada ah ee fikirka badan. Gabi ahaanba isku raacsan in macaamiisha faraxsan ay yihiin saaxiibka ugu dhow ee shirkadda